Iholide amakhaya kungenziwa ukufuthelana nge boilers zezinhlobo ezahlukene. Demand kokubili kagesi diesel, yebo, imishini igesi. Iningi labanikazi bazo kwezindlu ezweni uthanda ukufaka uhlobo yokugcina boilers. Yiqiniso, supply igesi emizi yabantu kumele kwenziwe kuncike emithethweni ethile kanye nemigomo.
imishini negesi, uma kuqhathaniswa zomculo okunye, has eziningi eziwusizo. Inzuzo enkulu ekhaya Ukushisa nge nokusebenzisa kwayo ezishibhile. Empeleni kubhayela gas kagesi ezibizayo ngisho udizili. Nokho, kusukela intengo "fuel blue" ngempela ongaphakeme, e abazothenga endlini ungagcina ku amalahle lemali kunalokho enkulu.
Ngokuvamile, gasification emizi yabantu akhiqizwa nemizana lapho sesitimela aphethwe. Kulokhu, lo msebenzi uhlanganisa indlela ukuxhuma kuyo, kanye izibalo ubude edingekayo kwamathenda isakhiwo gas amapayipi.
Uma umugqa akuyona edolobhaneni, iphrojekthi bezazisa gasification ezizimele. Kulokhu, phakathi kwezinye izinto, kunqunywa indawo ethangini igesi futhi izindlela uxhumano nalokho kubhayela.
Yiziphi izindinganiso okumelwe kubhekanwe nazo
Gasification emizi senziwa ngokuhambisana nemithetho babebeke umthetho. Ukulungiswa phezu eseceleni ukuze iphayiphi noma uxhumano igesi amathangi ingakhishwa kuphela uma:
umhlaba is owned;
endlini Inekamela, ngokuvumelana nezindinganiso afanele ukufakwa isibilisi.
Uma bobabili nale mibandela, usukulungele ukuba babuthane amaphepha adingekayo ukuze gasification futhi kukhethwa imishini ezifanele kakhulu.
Negesi kubhayela ngokuvumelana neziqondiso, kungenziwa kuphela ukufakwa magceke:
amakamelo Non-zokuhlala. Ngokuvamile boilers ukubeka ekhishini noma endaweni ekhethiwe. Boiler zingafakwa iyiphi phansi, kuhlanganise phansi.
Ukuba levolumu okungenani 15 m 3 (ukuphambuka kusuka yinto evamile ukukhuluma 0.2 m phezulu noma phansi) futhi ukuphakama ophahleni akuyona esingaphansi kuka 2.5 m.
Ukuba amafasitela windi livuliwe. Umthamo akhiphe kuleli cala kumele kube okungenani izikhathi ezintathu.
Imihlahlandlela ngenhla kunikeziwe boilers-60 kW. Negesi supply endlini emaphandleni ngokuvamile kuhilela ukusetshenziswa lolu hlobo imishini. Okuningi boilers enamandla efakwe abahwebi yangasese akuvamile.
Yiziphi imibhalo edingekayo
Ukuze gasify womzalwane, uzodinga:
Ikhophi ipasipoti lwezobuchwepheshe isakhiwo ngokwaso. Thola le dokhumenti BTI.
Imibhalo kuwo wonke imishini igesi uthenge.
Yikuphi enkantolo ukuvakashela
Okokuqala abanikazi iholide ekhaya kuzodingeka ukuya wendawo Planning Authority. Ilungelo labaqeqeshi le nhlangano ethile kuba gasification emizi yabantu. Kuzoba kuzomele uthole ifomu igunya elibhaliwe. Okulandelayo ukuvakashela abezicishamlilo (noma Tinsita), abize umhloli ekhaya ngoba kushimula ukuhlolwa. Nge khona kanye operability yakhe abanikazi endlini ezingalweni zakhe ekhishwe isenzo.
Kuzobe sekuba kudingeka ukuya legatsha lendawo le zesifunda izinkampani igesi noma Gorgaz futhi bathole izimo lobuchwepheshe zokwenza igesi endlini. Kube uzodinga ukubhala isicelo umsebenzi kunikezwa fomu. Kufanele ucacise funa kulinganiselwa for ivolumu igesi ngehora. It izobonwa kungakapheli amasonto amabili. Khona-ke ezibekiweko lobuchwepheshe okuzokhishwa kumnikazi endlini.
It ukwenza noma abasebenzi gorgaza, onjiniyela noma iyiphi inkampani ezikhethekile. Esikhathini yentuthuko yomklamo:
laying ipayipi yenziwa indlu wesifunda;
Okunqumayo emnyango yokwakha indawo.
Ubude amapayipi isetshenziswa ukuxhuma endlini iphayiphi, ngeke kakhulu zincike izindleko inqubo.
gasification Autonomous wenziwa usebenzisa ethangini gas. Phakathi ukuthuthukiswa project, kulesi simo izisebenzi Gorgaza kuyodingeka anqume indawo ukufakwa kwalo. ingxenye ekhethiwe lokukhuphula ethangini gas, kulokho akufanele ibekwe amamitha esingaphansi kwezinsuku ezimbili kusukela kusayithi kocingo hhayi ngaphansi kuka 5 m kusuka endlini.
Ngemva kwenta tinhlaka inkontileka esayinwe inhlangano ukuze akwazi ukufeza umsebenzi uxhumano. Qala onjiniyela inqubo kuphela ngemva iphrojekthi uzobe bavumelana nomnyango lobuchwepheshe inkampani, okuyinto waziphatha igesi supply endaweni ethile. Ngemuva yokuxhuma endlini emgqeni eyinhloko abanikazi bayo kuyodingeka, phakathi kwezinye izinto, ukuphothula isivumelwano ekugcineni imishini. Njengoba ungalindela, le abathintekayo inkampani efanayo, okuyinto eyenziwa ibha eseceleni.
Ixhuma amakhaya emgqeni emaphakathi esikhathini sethu - fun, ngeshwa, hhayi ushibhile kakhulu. Inani igesi supply izindleko kuhlanganisa:
Qoqa amaphepha. Have ukukhokhela zonke izinhlobo komsebenzi wombuso.
Kwakhiwe luhlaka. Kulokhu, incike yinkimbinkimbi umsebenzi. Shintshashintsha izindleko ukuthuthukiswa project can ngempela kabanzi - ruble 2 kuya kwezingu-20 ..
Isakhiwo iphayiphi. Izindleko zomsebenzi ezimweni eziningi imayelana ayizinkulungwane 1. Ruble ngamunye imitha square.
I u ipayipi. Lo msebenzi kuyodingeka bakhokhe angaba yizinkulungwane 10. ruble.
Futhi-ke, nezilinganiso kuzomele sifake intengo kubhayela, amapayipi, radiators nokunye. D. Lolu hlobo imishini futhi akakwazi ngokuthi ezishibhile. Izindleko kubhayela, isibonelo, kuye ngokuthi amandla, kungenzeka 17 000-40 000. Izinto zesimanje radiators bimetallic ziyizinkulungwane ezingamashumi 3-7. Ruble. Autonomous igesi supply izindleko Yiqiniso, ezibizayo. Izindleko ubuncane ethangini gas ayizinkulungwane 60. Ruble.
Ngemuva yokuxhuma indlu ukuba ibhasi ngumnikazi Yiqiniso, kuyodingeka ukuba banamathele neziqondiso imishini igesi. Ukuze kubhayela msebenzi ungenziwa uqhubeke kuphela ngaphansi kokuqondisa ochwepheshe inkampani u izinkontileka for inkonzo. Futhi, bonke abantu abadala abaqashile baye ngomzuzu-ayisishiyagalolunye ukutshela abagibeli ngokuphepha e Gorgaz.
Kanjani ukwenza ukubala we uhlelo Ukushisa
Izitebhisi - ukwakhiwa
INtaba i-Ararat - imfihlakalo, imfihlakalo, inganekwane
Imiqhele phezu amazinyo akhe njengoba isethi futhi bayini? Yiziphi izingcezu engcono
Umlingisikazi ULyudmila Krylova: Biography, ukuphila siqu, izithombe
Yiluphi olwandle e-Feodosia - isihlabathi noma amatshe amatshe? Iyini ibhishi laseFeliodosia ngempela?